Gbasara Anyị | ZHEJIANG JIAWEI ARTS & CRAFTS Co., Ltd.
Zhejiang Jiawei Arts & Crafts Co., Ltd. bụ onye nrụpụta na onye na-ebubata akwụkwọ osisi na akwụkwọ osisi ， ifuru. Anyị nọ n'obodo Dongyang, ógbè Zhejiang, China. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere osisi nkwụ, osisi Ficus, osisi osisi, osisi Fiddle, osisi Coconut, osisi banana, Dracaena osisi, osisi Orchid na osisi Monstera wdg.
Ntobere na 2003, Anyị ụlọ ọrụ nwere mpaghara 26000 square mita na 400 square mita ime ụlọ. Na-ewere afọ 16, ụlọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 na ọtụtụ puku ụdị. Netwọk ahịa ahụ agbatịala mba 40 nke ụwa, ọ na-egwuri egwu dị mma na AUSTRALIA, UK, GERMANY, FRANCE, POLAND, JANPAN, Mexico, BRAZIL na obodo na mpaghara ndị ọzọ.
Ihe ịga nke ọma nke Jiawei sitere na bụghị naanị ngwaahịa nwere ezigbo mma, yana ikike siri ike nke ijikwa ọnụ ahịa, kamakwa ime nyocha, imeziwanye na ịchụso ihe ọhụrụ. Iwulite ndi okacha amara ndi ahia, ịzụta ihe ndi eji emeputa ihe di elu na idobe usoro nhazi ihe nlere anya anyi n’enwe ike idebe ikike mpi siri ike na udiri ebido n’iru n’aho.
Na 2018, ụlọ ọrụ anyị agafeela Sedex Audit. ikike mmepụta anyị kwa ọnwa ruru 30 site na 40 HQ.
“Onye ahia mbu, Dabere na ọrụ, Nrigbu na Innovation, Chụsie ike dị elu” bụ ụkpụrụ na ụkpụrụ anyị. OEM nokwaara anyi. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ndị ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ iji guzobe nkwado ma mepụta ọdịnihu mara mma ọnụ anyị.